Ukudlala njani iMidlalo yeKrisimesi ukusuka kwiMfutshane ukuya kuYinqoba
Indlela yokudlala imidlalo yeHholide kwiMinute ukuya kuYinqoba
Umdlalo ubonisa iMinute yokuYinqoba isinike zonke iindidi zokuzonwabisa esinokuzidlala ekhaya, kunye neentlobo zabo ezikhethekileyo zeKrisimesi zee-episodes zanikeza umxholo weeholide oweqela le midlalo. Baphumelele kumaqela eKrisimesi, imidlalo yezemidlalo yokudlala eklasini, amaqela eofisi, okanye nayiphi na ididi yokuhlangana. Nantsi indlela yokudlala yonke iMfutshane yokuYinqoba imidlalo yeKrisimesi. Emva kokuba uphequlise imidlalo, fumana amathiphu ngokusingatha iMzuzu yokuPhatha i-Christmas Party . Khumbula, yonke le midlalo kufuneka igqitywe ngomzuzu omnye okanye ngaphantsi.
Ibhola leKrisimesi isekelwe kwiNgcaciso yeNgcaciso yokuThola umdlalo obizwa ngokuba yi- Egg Roll . Ukudlala, kufuneka usebenzise ibhokisi elenziwe ngesipho (malunga nobungakanani bebhokisi lephepha) njengomshicileli ukuhambisa umhlobiso weKrismesi ojikelezayo ngaphantsi komgca. Ibhokisi kufuneka ingathinti umhlobiso ngelixa umdlalo udlala. Uyakwazi ukuhluka umgama ukuba umhlobiso ufanele ukhangelwe ngokuxhomekeke kwiminyaka yabantu abadlala.
I-Conveyor yeBhisimusi idlalwa nabantu ababini. Bemi, bejongene, ekude kunqunywe ukuba kunzima kangakanani ukufuna umngeni. I-ribbon ihlanganiswe ngeenxa zonke zombini abadlali, ngokudala i-loop ejikeleze kubo bobabini. Umdlali wokuqala unesitya ngeemfesane zeKrisimesi kwiikhonkco kunye nomthi omncinane weKrisimesi kunye naye. Ukudlala umdlalo, umdlali wokuqala ugoba umhlobiso kwi-ribbon. Abadlali ababini mabaze bajikeleze kwi-tandem ukuze bahambise umhlobiso kwindlela ejikeleze idibhoni, bephelile emva komdlali wokuqala, omele umxhomeke emthini. Yenza umdlalo ube nzima ngakumbi ngokufuna iimpahla ezithengiswayo eziza kutshintshwa "kumthumeli."
Misa iKrisimanier yeKrismesi ngokubeka amakhadi ayishumi eKrismesi evulekile emgceni kwitafile, kufuphi nomda. Yima amakhadi ngokukhawuleza kangangokuthi ibukeka njengeentente ezincinane. Emva koko, ume ngasecaleni kwetafile. Into yomdlalo kukuqhuma kumakhadi, ngapha kwetafile, ukuwahambisa ekupheleni kwetafile ukwenzela ukuba enye ishiywe ixhomeke ngaphaya kwemida ngaphandle kokuwa. Unemizuzu emibini kunye nemizamo elishumi yokufeza umsebenzi wakho.
IKrismesi kwi-Balance idlala ngamabini. Beka ityhubhu yephepha engenanto etafileni okanye phantsi, kwaye ulinganise umgca wecala phezulu kwiphubhu. Omnye wabadlali ababini unemiqhele emihlanu yomthi weKhisimusi yobukhulu obulinganayo nobukhulu. Emile kumacala athileyo kumgca wecala, abadlali kufuneka basebenze ndawonye ukuze baxhomeke yonke imihlobiso emihlanu kwicala lawo ngaphandle kokukhangela isakhiwo. Ukuba isakhiwo siwela umdlalo uphele. Sincoma imihlobiso yeplastiki ukuphepha umonakalo.
Ngokusekelwe kumdlalo we-Spoon Tune, iKrisimesi uJingle idinga ukuba usebenze ngaphambi kokudlala. Iiglasi ezili-11 kufuneka zizaliswe ngamanzi amaninzi, zilungiswe ukuze zidlale amanqaku omgca wokuqala weNgoma yeKrisimesi iJingle Bells xa ifakwe kwisipuni sesinyithi. Beka iiglasi ezilungiselelwe ngokulandelelana kwitheyibhile. Ukudlala umdlalo, umqhubi kufuneka alungiselele iilazi ngendlela efanelekileyo yokudlala le ngoma.
I-Deck iBhola enye enye umdlalo weqela leebini. Ukusebenzisa ityhubhu yephepha engenanto, umdlali wokuqala usebenzisa isantya emlonyeni wakhe ukuphakamisa umhlobiso ngebhubhu, kwaye uyithumele kumdlali wesibili. Umdlali wesibini kufuneka afumane umhlobiso ngendlela efanayo (kunye nephepha lokubamba iphepha kunye nokutshiza), kwaye uxhomeke kumgca wokulinda (uphonywe ngefestile yefestile). Ukuphumeza lo mdlalo, abadlali mabaxhomeke imihlobiso emithathu ngokusebenzisa le ndlela ngomzuzu okanye ngaphantsi.
Ngaba Uyayiva into endiyivayo?
Ukumisela Ngaba uva oko Ndikuvayo, thatha amabhokisi anesibhozo esisixhenxe esinesigcawu esifanayo kunye neendawo ezincinane ze-jingle kwizinto zazo. Iibhokisi kufuneka zibe neenombolo ezilandelayo: 5, 10, 15, 20, 25, 30, no-35. Beka ibhokisi evaliweyo etafileni. Ukudlala umdlalo, umqhubi makalungiselele ibhokisi ngokulandelelana ngenani leentsimbi eziqulethe, ukusuka kwincinci ukuya kwelona likhulu. Abaqhubi banokuthi bathathe kwaye bawagubungele iibhokisi, kodwa akufanele bajonge ngaphakathi.
Ikhefu leKrisimesi elidlulileyo
Ikhefu leKrisimesi elidlulileyo ngumdlalo onzima - nokuba nzima kunomdlalo wokuqala weNutstacker osekelwe kuyo. Abadlali kufuneka basebenzise i-candy ngodaka ukuze baqoke amanqatha anesibhozo esinesisigxina kunye ne-stack yabo, omnye ngomnye, ukwenza inqaba yamantongomane kwisitya. Ikhonkxa kunye namantongomane atyhulwa kwi-tray, eyenziwa ngumdlali ukuba atyeke amanqatha emanzini. Isitya sibanjwe kwisandla sabantu abadlali ngelixa ezama ukwenza inqaba ngokukhwabanisa amantongomane ngobuncwane ngotye, ngomnye, phezulu komnye. Amantongomane kufuneka agxinwe ukuma kwelinye icala (ukuze imbobo ibonakale xa uyijonga ngokuthe ngqo), ayiyi kulubala. Ukuba iinqununu zesikhokelo, umdlalo wenziwe.
Jongana noMntu weGingerbread
Jongana nomntu we-Gingerbread udlalwa ngokufana ne- Face Cookie , usebenzisa umntu we-gingerbread endaweni ye-Oreo. Hlala phantsi uze uncike intloko yakho emva; faka ikhukhi ebunzini lakho kwaye uyishukumisele emlonyeni wakho usebenzisa kuphela izihlunu ebusweni bakho. Ungathinti ikhukhi ngezandla zakho! Ingxenye ebhetele malunga nalo mdlalo kukuba, ukuba uphumelele, umvuzo sele usakhiwe.
Iholide yeHestle idlala nabantu ababini. Umntu ngamnye unomgca odibeneyo okhalweni lwakhe emva (oku kunokuba nzima ukuba umise, kodwa indlela elula ukuyisebenzisa kukusebenzisa i-glue eqinile kwaye unamathele emagqatsheni kumabhande ezindala zekhanda). Gquba ubude bebhondi ngokujikeleza komnye weeardticks - ubude buyahlukahluka kuxhomekeke kwindlela enzima ngayo umdlalo. Namathisela ukuphela kwebhebhoni ekupheleni komnye umgca. Ukudlala, abadlali bamele bajongane nomgama okwaneleyo phakathi kwabo ukuze iiphelo zazo zidibanise. Ukusebenzisa kuphela iinqumlo zabo, kufuneka baqhube irayoni ukusuka kwelinye igumbi ukuya kwelinye.
I-Kiss Kiss ifuna amaqela amabini ukuba adlale. Imicu emibili yohlobo lwe-dressline ixubile, isebenze nayiphi na umgama phakathi kwabo othanda. Ukugqithiselela kude kube nzima kunomdlalo. Hlanganisa ezinye zeempahla zeKrismesi ukusuka kwenye yezixhobo. Ukudlala, iqela kufuneka libeke imilomo yawo kwicala elinye lemihlobiso kwaye liyithumele kwenye intambo isebenzisa kuphela imilomo yabo. Imihlobiso emithathu kufuneka ihanjiswe ngempumelelo ngale ndlela ngaphakathi kwexesha elithile ukuze inqobe umdlalo.
Ukumisela iHong With Care, uza kusebenzisa esinye isakhiwo sokubambisana kunye nomgca ococekileyo-uloba lokuloba uza kusebenza kakuhle apha. Abadlali kufuneka baxhomeke iimbotyi ezintathu zeetroyunithi ngentambo kunye neengcebiso zabo - kungekhona kwinqanawa, kodwa indawo encinci ekupheleni kwekhonkco. Zonke iibhola ze-candy kufuneka zihlale zixhoma ngokukhawuleza imizuzwana emithathu ukuze iphumelele umdlalo.
Lo mdlalo ususelwa kumdlalo owaziwayo u- Junk kwiTrunk . Thatha ibhokisi elingenanto le-Kleenex uze ulizalise nge-bing 12 ze-jingle. (Ukuze ukwenze umthendeleko ngakumbi, bhokisa ibhokisi ngephepha leKrisimesi kuqala). Ukudlala iJingle kwiTrunk, ibhokisi kufuneka ifakwe kumgca osezantsi kumdlali (sebenzisa ibhande elidala, okanye umtya weglue ngaphesheya kwebhokisi ukuyibopha ngokukhuselekileyo kumlenze womdlali). Into yomdlalo kukugubha, ukuxuma, kwaye ujikeleze ukuze ufumane zonke iintsimbi ezivela kwibhokisi ngaphakathi komda wexesha elilodwa.
Ukudlala iMerry Fishmas, qalisa okokuqala "intonga yokuloba" ngokusebenzisa umtya ukuze ubophe ikhonksi njengobhedu kwi-chopstick - udibanise umgca owodwa wesikhotho esifutshane somgca we-candy, udibanise enye yomtya ukuya ekupheleni kwesithintelo. Emva koko, faka iibhokhwe ezine ezincinci etafileni kunye neempompo ezijikelezileyo zixhoma emcimbini, zijongene phantsi. Xa iqela liqala, umdlali ubeka isikhotho emlonyeni wakhe aze azame ukugubha zonke iimbotyi ezincinci ezine, ngamanye amaxesha, ekupheleni kwekrakra enkulu.
Nyusa iglasi yakho
Ukuba abantwana baya kudlala lo mdlalo, okanye ufuna ukuphepha umonakalo, sebenzisa iiglasi zeplastiki kunye nemigcobo yokuphakamisa i-Glass yakho. Into yomdlalo kukuba wenze inqaba yeglasi kunye nemigcobo. Uza kufuna iziglasi ezine zeartartini kunye nemihlobiso encinane yeKrismesi. Ukudlala, faka imihlobiso emine kwiiglasi ezintathu - iindlovu ziya kuphuma eziqongweni zeglasi ezizo, kwaye oku kuyinxalenye yomngeni. Gcina iilazi ezintathu ezizaliswe ngaphaya komnye, ulungise imihlobiso njengoko uhamba ukuyigcina. Ingilazi engenanto kufuneka ibandakanyeke phezulu. Isakhiwo kufuneka sibe sikhululekile-mizuzu emithathu esilandelayo ukuze iphumelele.
I-Reindeer Nose Dive
Lo ngumdlalo omnandi kuwo wonke unyaka. Ngaphambi kokuba umdlalo uqale, bopha i-pom-pom enkulu ebomvu ukuya kwibhite ebomvu. Ukuze ulungele umdlali, kufuneka abe ngumqhubi we-reindeer (oku kukhethekileyo kodwa ngokuqinisekileyo uyongezela kumoya womdlalo) kwaye udibanise i-ribbon kunye ne-pom-pom eqhotyoshelweyo emlonyeni wakhe. Faka i-dab encinane ye-petroleum jelly kwimpumlo yakhe. Xa i-timer iqala, kufuneka ajike i-pump-pom aze ahlale empumlo wakhe esebenzisa umlomo wakhe nomzimba wakhe - akukho zandla.
Ibhola le-Snowball idinga iqela labantu ababini ukuba badlale kunye. Beka ezine iibhola ze-styrofoam ezinkulu (ezifumaneka kwiivenkile zokuthengisa) kwiisitishi okanye kwiitrato ezincinci, zibekwe ngokulandelelana. Yakha imigca emibini engcolileyo kumgangatho ngaphesheya komgca usebenzisa i-tape enemibala - umgama wendlela engcolileyo ukusuka kwiibhola kuya kuwe, kodwa zombini kufuneka ibe lide elilinganayo. Ukudlala, abadlali basebenzisa iibhola ze-ping pong ukuze bazame ukubetha iibhola ze-styrofoam ezihamba ngeenyawo zabo. Ukubanjwa kukuba iibhola ze-ping pong kufuneka ziqhube kanye emva komgangatho ngaphambi kokuba zifike kwi-styrofoam "iibhola zebhola."
I-Rere Relay enye yomdlalo womntu omibini. Isixhobo esisodwa esiza kuyidinga sinye esikhulu-esinokuthi sinamathele kakuhle iintloko ezimbini ngaphakathi kwithuba lokuvula - kunye nento yokuxhoma i-wreath, njengokungena umnyango, ukukhonkxa kwindonga, okanye kwengubo yengubo. Maka amanqaku amahlanu "kwindawo yokudlala" esezantsi usebenzisa i-tape, uhamba uvela kwindawo apho i-wreath ixhomeke khona. Abadlali baqala ekupheleni kweemakethi zendawo yokudlala kunye nomdlali omnye ogqoke i-wreath entanyeni yakhe. Umdlali wesibini kufuneka ahlawule aze athathe intloko yakhe ngaphakathi kwinqanaba xa umdlali wokuqala ekhupha ikhanda lakhe. I-wreath kufuneka idluliselwe ngale ndlela, kunye nabadlali abahamba ngeenxa zonke njengoko kuyimfuneko, kanye ngexesha ngalinye lokudlala. Emva kokutshintshela ezintlanu, umdlali wesibili uya kuba ne-wreath entanyeni yakhe-unokuyiphakamisa ngezandla zakhe kwaye uyifake.
Eminye 'iMinute Yokuyinyusa' iMidlalo yeKrisimesi
Nangona le midlalo yayisetyenzisiwe kwikholi yeeholide, enye iMfutshane yokuYinqoba iimidlalo ingasetyenziswa kwaye isetyenziswe kwiqela leKrisimesi. Konke okufuneka ukwenze kuvela ngamagama okudala kwimidlalo yakho entsha! Nazi iziphakamiso ezimbalwa nje:
Ibhantshi yeThitshitshi - Yitshintshela ama-flippers ngamabhokisi esipho efihliweyo amade, kunye nepholile ebhokisini enkulu okanye engxowa yesipho evulekile.
Bite Me - Sebenzisa izikhwama zesipho sikaKhisimusi endaweni yeebhasiki zephepha.
Izibhokozo phezulu - Esikhundleni se-yo-yo, sebenzisa umhlobiso weKrisimesi kwintambo ende.
I-Candelier - Sebenzisa iiplate zephepha ze-Krismesi ezinomxholo walo mdlalo.
Indlovukazi Matshi - Faka indawo yebhola ngebhola elikhulu leKrismesi, kwaye umbala amanzi kwiibhotile kwi-festive ebomvu kunye nobuluhlaza ngokutya kombala.
'Iminithi yokuYinqoba' Yayiphonsa Umdlalo
Iimfazwe eziPhambili zeMfazwe ezibonwa kwiNgqalelo yeSitha
Umzekelo wovavanyo lweMvume
Kufuneka-Jonga i-Movies Skating Movies
I-2016 ROUSH Mustang Lineup